Trump oo Kim ugu baaqay inuu hubkiisa Niyuukilarka soo wareejiyo - BBC News Somali
Trump oo Kim ugu baaqay inuu hubkiisa Niyuukilarka soo wareejiyo
30 Maarso 2019
Image caption Trump iyo Kim
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong un warqad u diray isaga oo ugu baaqay inuu hubka Niyuukilarka uu dalkiisu leeyahay uu ku soo wareejiyo.
Mr Trump warqad yar oo uu u diray Mr Kim ayuu uga dalbaday inuu hubkiisa Niyuukilarka uu gacanta ka soo geliyo.
Kulanki labada hoggaamiye ay bishi hore ku yeesheen magaalada Hannoi ee dalka Vietnam marki uu dhicisoobay kaddib madaxweyne Donald Trump wuxuu gacanta ka geliyey qoraal uu ku sheegay Kuuriyada Koonfureed iney la gudboon tahay iney hubkeeda Niyuukilarka faraha naga soo saarto.
Kim Jong-un oo soo gebagabeeyayo booqashadiisa Vietnam
Donald Trump: 'Kim Jong-un waa nin xariif ah'
Warkan oo aan ka soo xigannay Reuters ayaa sheegaya in marki ugu horreysay dalab noocani ah loo soo jeediyey xukumadda Piyingyang waxay ahayd sanaddi 2004-tii.
Hase ahaatee aqalka cad ee Mareykanka ayaa ka gaabsaday codsiga Trump uu Kim u jeediyey inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiso.
Image caption Kim Jong-un iyo Donald Trump
Shirki ay labada hoggaamiye ku yeesheen Hannoi ayaa degdeg ku soo gabagaboobay kaddib marki ay wadahaddalladooda heshiis ku soo afjari waayeen.
Daawo salaanta taariikhiga ah
Trump muxuu u oggolaaday kulankii Vietnam ka dhacay?
Haddii Kim uu dhiirigelin ka helo guusha dhaqaalaha ee Vietnam, haddaba taasi ayaa waxaa suuragal ah in noqoto mid u soo jiidda Washington.
Tan iyo wixii ka dembeyay isbedeladdii dhaqaale ee loogu magac daray Doi Moi ee sanadkii 1986 ee looga gol lahaa in la asaaso suuq bulshada diiradda lagu saarayo, ayaa Vietnam waxay ka mid noqotay mid ka mid ah dalalka qaarada Aasiya ee uu dhaqaalahooda sida xowliga ah sare u kobcayo.
Xilli uu booqasho ku tegay dalka Vietnam sanadkii hore, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka, Mike Pompeo, waxaa uu sheegay in haddii Kim uu si wanaagsan u isticmaalo fursadda uu haysto uu mucjiso ka dhigi karo Kuuriyada Waqooyi.
Trump waxaa uu booqday dalka Vietnam sanadkii 2017 markii dalkaas uu marti galiyay shirka dhaqaalaha ee dalalka Asia-Pacific-gga (APEC), Prof Thayer waxaa uu sheegay in Vietnam ay isu aragto goob labada dhinac ay kalsooni ku qabaan.
Trump iyo Kim Jong-un oo wali isu Hanjabaya
Maxaa lixdan qodob wali loo hadal hayaa ka dib kulankii Trump iyo Kim?
Waxaa uu intaasi ku daray: ''Mareykanka waxaa uu garwaqsan yahay taabagelinta mudada dheer ee Vietnam ee ay ku xakamaysay hubka wax gumaada, iyo taageerada haatan ay ka gaysatay fulinta cunaqabataynta ay Qaramada Midoobay ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi.
Image caption Kim iyo Trump oo u arkay iney Vietnam kulankooda dhexdheaaxd u tahay
Shirka taarikhiiga ee Mareykanka iyo Kuuriyadda Waqooyi ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli dalka uu diyaar u yahay in uu soo bandhigo kartidiisa diblomaasiyadeed iyo in ay ka go'an tahay in uu soo jiito maalgashiga dibedda.
Ku dhawaaqista kaddib, xafiiska Madaxweynaha Kuuriyadda Koonfureed ayaa soo dhaweeyay madasha shirka ee loo doortay Vietnam.
Taariikhda iyo goobta kulanka Trump iyo Kim Jong-un oo la shaaciyay
Kulanka Kim iyo Trump oo ka dhacaya jasiiradda Sentosa
'' Vietnam ayaa mar hub kala soo horjeeday Mareykanka, balse maanta waa saaxiibo,'' wakaalada wararka ee Yonhap ayaa soo xigatay Afhayeen Kim Eui-kyeom oo sidaasi leh.
''Waxaan ku rajo weynahay in Vietnam ay noqon doonto meel u wanaagsan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi si taarikh cusub loo sameeyo.''